Indlwana ye-Starfish - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Donna
I-Starfish Cottage iphakathi nendawo ezungeze iCabot Trail edumile emhlabeni wonke, edolobhaneni elihle lasePleasant Bay. Le ndlu encane enhle yokulala engu-2 isanda kulungiswa futhi ifinyelela ukubukwa okuhle.
Itholakala phakathi nendawo ezungeze iCabot Trail edumile, edolobhaneni elithulile lasePleasant Bay, leli kotishi elinamagumbi amabili okulala lizokujabulisa. Ilungiswe ngokwengxenye ngo-2018, leli kotishi linakho konke okudingayo ukuze uzizwe usekhaya. Lokhu kuqashwa kunamakamelo okulala ama-2, ikhishi eligcwele, igumbi lokugezela, igumbi lokuhlala nendawo yokuwasha enewasha neyomisa. Le ndawo emnandi inompheme omkhulu kanye nendawo enhle yokubuka ukushona kwelanga okumangalisayo.
I-Starfish Cottage iseduze ne-Rusty Anchor Restaurant. Futhi i-1KM ukuya e-Cape Breton Highlands National Park, enokubukwa okumangalisayo nezindlela ezingu-26 zokuhamba izintaba. Siphinde sibe uhlelo lokusebenza 1 KM ethekwini lethu lendawo kanye nolwandle.
Ngitholakala ngombhalo noma nini futhi ngihlala kwamakhelwane ukuze ngikwazi ukubhekana nanoma yiziphi izinkinga uma zivela.